JIGJIGA: Ujeeddada Kulan Ka Dhacay Madaxtooyada Iyo Qodobbadii Kasoo Baxay - Jigjiga Online
HomeSomalidaJIGJIGA: Ujeeddada Kulan Ka Dhacay Madaxtooyada Iyo Qodobbadii Kasoo Baxay
JIGJIGA: Ujeeddada Kulan Ka Dhacay Madaxtooyada Iyo Qodobbadii Kasoo Baxay
Jigjiga (JigjigaOnline) – Xarunta madaxtooyada Dawladda Deegaanka Soomaalida, waxa maanta ka qabsoomay shir ay iskugu yimaaddeen Golaha Sare ee Islaamka, Ciidamada Booliska iyo Wasiirka Madaxtooyada DDS.
Kulankan oo uu guddoominayey Wasiir Xasan Maxamed Xuseen, ayaa waxa lagaga wada-hadlay u diyaar-garowga munaasibadda Ciid Al Odxa oo ku beegan maalinta Axadda ah ee foodda inagu soo haysa.
Waxaa kulankaas ka hadley Sh. Axmed Aabi Mataan oo ah gudoomiyaha golaha sare ee Islaamka ee DDS, waxaanu sheegey fadliga iyo wanaaga ay leedahay Ciidani in si wacan maamul iyo dadweynahaba looga qayb qaayto.
Waxaa sidoo kale ka hadley kulankaas Taliya booliska DDS Maxamed Cali Xasan oo sheegey in mar walba ciidanka booliska DDS diyaar u yihiin ilaalinta nabada iyo nidaaminta meelaha ay dadku ku tukanayaan ee ay iskugu yimaadaan in ay tahay waajibaadkooda mar walbana ayshaqadooda u qaban doonaan sida ugu wacan.
Muxuu yahay xidhiidhka ka dhexeeya akhriska iyo caafimaadka maskaxda?
ONFL Oo Shaacisay Qorshe Cusub Oo Ay Ku Waajahayso Xorreynta Ogadenia